रेष्टुरेन्टमा बैठक राख्दै हिँड्ने डोलिन्द्रलाई पुनः शिक्षाको स्पष्टिकरण - Pahilo News
रेष्टुरेन्टमा बैठक राख्दै हिँड्ने डोलिन्द्रलाई पुनः शिक्षाको स्पष्टिकरण
२८ भदौ । चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि साझा प्रकाशनका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई शिक्षा मन्त्रालयले पुनः तीन दिने स्पष्टिकरण सोधेको छ । भदौ १९ गते मन्त्रालयले मागेको तीन दिने स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि मंगलबार फेरि तीन दिने स्पष्टिकरण सोधेको हो । यसअघि शर्माले भदौ २३ गते स्पष्टिकरण बुझाएका थिए ।
दोस्रो पटक स्पष्टिकरण सोध्दा भने मन्त्रालयले कारबाही गर्ने संकेत देखाएको छ । साउनमा मन्त्रालयद्वारा गठित छानविन आयोगले उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा साझाको सञ्चालक समितिलाई नै बर्खास्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, साझालाई अनियमितताको दलदलमा फसाएका अध्यक्ष शर्मा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु धाएर कारबाही हुनबाट जोगिदै आएका थिए ।
यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधे पनि अध्यक्ष शर्माले भने साझाको सञ्चालक समितिको बैठक राख्न भ्याएका छन् । अध्यक्ष शर्माले केही दिनअघि अनामनगरको युनियन हाउस नामक रेस्टुरेन्टमा सञ्चालक समितिको बैठक राखेका थिए ।
अध्यक्ष शर्माले सोमबार पुल्चोकस्थित साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक नराखेर युनियन हाउसमा राखेका हुन् । साझाको कार्यालयमा बैठक राख्दा कर्मचारीहरुको प्रतिवाद सहनुपर्ने भएकाले उनले भूमिगत शैलीमा कार्यालय बाहिरै सञ्चालक समितिको बैठक राखेका हुन् ।
उक्त बैठकमा सञ्चालक दीनानाथ शर्मा र डा. विजय सुब्बा भने अनुपस्थित रहेको बताइन्छ । अध्यक्ष डोलिन्द्रका हरेक अनियमिततामा सघाउँदै आएका सञ्चालक शर्मा काठमाडौं बाहिर रहेका हुँदा बोर्ड बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए भने अर्का सञ्चालक सुब्बा भने ‘साझा परिसरभन्दा बाहिर बस्ने बैठकमा नजाने’ अडान लिएर सो बैठकमा अनुपस्थित रहे । उक्त बैठकमा सञ्चालकहरु प्रदीप नेपाल, डा. कृष्णहरि बराल, जीवनचन्द्र कोइराला र हरिहर खनाल उपस्थित थिए ।
कारबाहीको दायरामा तानिन लागे पनि अध्यक्ष शर्माले बोर्ड बैठक बसालेर साझाको अहिलेसम्मको सबै लेखा परीक्षण गराउने निर्णय गराएका थिए । सञ्चालक जीवनचन्द्र कोइरालाका अनुसार १०–११ वर्षदेखि साझाको अडिट हुन नसकिरहेको हुँदा आगामी तिहारसम्म अडिट सिध्याउन महाप्रबन्धक शर्मालाई निर्देशन दिइएको थियो । अध्यक्ष शर्माले जथाभावी रुपमा करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीहरुको नियुक्तिलाई पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको सञ्चालक कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘अब साझालाई चाहिने नयाँ कर्मचारीहरु विज्ञापन प्रकाशन गरेरै माग्ने निर्णय भएको छ ।’